Guddoomiyaha Aqalka Sare oo kulan la qaatay Michael Keating | allsaaxo online
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo kulan la qaatay Michael Keating
Published on February 15, 2018 by admin mahamuud · No Comments
Kulankaan ay wada qaateen Guddoomiyaha Golaha Aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Machael Keating ayaa waxay uga hadleen Dastuurka iyo howlaha Aqalka sare.
Kulanka oo saxaafadda dibad joog ay ka ahayd,ayaa markii uu soo gaba-gaboobay waxaa saxaafadda la hadlay Habdhooraha Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Kaafi Macalin Xasan.
Wuxuu sheegay in arrimaha Dastuurka iyo furitaanka fadhiyada Aqalka Sare looga hadlay kulanka, iyaddoo Ergayga gaarka ee Q.M ee Soomaaliya ay tahay markii 3-aad ee kulan uu la qaato Guddoonka Golaha Aqalka Sare.
Dhinaca kale Xarunta Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxaa kulan la qaatay xubnaha guddiga la socodka iyo dib u eegista laba gole baarlamaanka JFS, iyaddoo kulankaasi uu shir guddoominayay guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista laba gole mudane Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid.
Kulanka ayaa lagaga doodayay oo qodob qodob loo dul istaagayay qabyo qoraalka Dastuurka, kulankana waxaa ku sugnaa xubno ka socday dowlad goboleedyada oo xubno ka noqonaya guddiga sida warbaahinta uu u sheegay Sen. Xuseen Sheeq Maxamuud xoghayaha guud ee guddiga la socodka iyo dib u eegista laba Gole Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.